April 28, 2020 - Online Hartha
သင့်အိပ်မက်တွေကနေ တစ်ဆင့် သိနိုင်မယ့် သင့်ရဲ့အကြောင်း…
BOB 1 Cyclone… သတိပေးချက်…
BOB 1 Cyclone… သတိပေးချက်… ၂၀၂၀ မေလ ၃ရက်နေ့မှာ Andaman Island (အန်ဒမန်ကျွန်း) အနီးမှာ Depression (or) Deep depression မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး မြောက်/ အရှေ့မြောက်ဖက်ကို ဦးတည်ရွှေ့လျှားနိုင်ပါတယ် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တစ်ကောင်းဆီသို့ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်…. Update သတင်းများကို ဆက်လက်နားစွင့်ပေးကြပါနော်…. 28/04/2020 at 3:24pm (MMT) SU SU SAN unicode BOB 1 Cyclone… သတိပေးခကျြ… ၂၀၂၀ မလေ ၃ရကျနမှေ့ာ Andaman Island (အနျဒမနျကြှနျး) အနီးမှာ Depression (or) Deep depression မုနျတိုငျးငယျတဈခုဖွဈပျေါလာနိုငျပွီး မွောကျ/ အရှမွေ့ောကျဖကျကို ဦးတညျရှလြေှ့ားနိုငျပါတယျ ရခိုငျကမျးရိုးတနျး … Read more
ကိုယ့်အမရဲ့ သတိုးသားလောင်းကို မြူဆွယ်မိတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ ဖြစ်ရပ်
လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်အုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှ အဲ့ဒီကောင်မလေးက (မီနီ-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီး အတွင်းခံဘရာစီယာလည်း ဝတ်မထားဘူး။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပြောတယ် သူ့အစ်မက အခုဆို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်။ ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူ့ညီမလေးက ကျွန်တော့် အနားကို ကတ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောတယ်။ သူ့အစ်မနဲ့ လက်မထပ်ခင်ကျွန်တော့် … Read more